Wararka - Shirkadda Jiafeng: Wax soo saarka RPET wuxuu noqon doonaa isbeddel ku yimaada horumarka waara ee qalabka mustaqbalka.
Shirkadda Jiafeng: Waxyaabaha loo yaqaan 'RPET' waxay noqon doontaa isbeddel ku yimaada horumarka waara ee qalabka mustaqbalka.
Shirkadda Jiafeng: Waxyaabaha loo yaqaan 'RPET' waxay noqon doonaan isbeddel ku yimaada horumarka waara ee qalabka mustaqbalka.
Hadda waa mid deg deg ah in la ilaaliyo deegaanka. Warshado badan iyo inbadan ayaa garwaaqsaday muhiimada wareegga saaxiibtinimada iyo ku biirista RPET iyo wax ku biirinta ilaalinta deegaanka. oo ka samaysan dhalooyin caag ah oo dib loo warshadeeyay oo dharka noocyada cusub ee ilaalinta deegaanka ee cagaaran, ilaha yar ee kaarboonka, ayaa abuuray fikrad cusub oo ku saabsan dib-u-cusboonaysiinta.
Iyadoo la tixgelinayo horumarka waara, hadda waxyaabo badan oo deegaanka u habboon ayaa loo isticmaalay halkan ballaaran: cudbi dabiici ah ama dabiici ah iyo maro wanaagsan ayaa meel walba laga yaqaan, qalabka RPET ayaa jidka ku jira ， halka dib loo warshadeeyay EVA ama dib loo warshadeeyay TPU isbedelka cusub. Maaddooyinka fiber-ka cusub ee dhirta sida dharka cananaaska iyo dharka mooska ayaa la soo saaray oo laga faa'iideysanayaa.
Jiafeng waxaa lagu ammaanay inay ku adkaysato ruuxa "daacadnimo, kalsoonida, iskaashiga iyo waxtarka labada dhinac", iyadoo aan la dhaawicin deegaanka.
Color Midabka Tyvek atla）
Jiafeng marwalba wuxuu ku adkeysanayaa in adeegsiga alaabooyinka deegaanku ay yihiin isbeddellada waxtarka u leh adduunka.Bandhiggan RPET kaliya maahan inuu buuxiyo baahiyaha deegaanka iyo tayada sare, laakiin wuxuu ku habboon yahay dadweynaha guud, wax ku ool ah iyo moodada.
Jiafeng sidoo kale waxay haysataa noocyo kale oo bagaallo ah oo leh qalab kala duwan oo bey'ada u habboon.
1 po Boorsada gogosha linenka ah
2 bag Bacda cudbida loo yaqaan 'Reclycable bac'
3 bag Warqad bac ah oo caws ah
4, Bacda warqadda 'Tyvek'
5, Boorsada warqadda Kraft
6 、 Xusuusnow EVA
7 Boorsooyinka kale ee RPET
Marka loo barbardhigo suufka 'polyester PET' dhaqameed, RPET ma aha oo kaliya muujinta qaabka dhirta PET laakiin faa'iidooyinka dharka suufka.